Ukurisayikilisha kwezinto ezenziwa ngombane kunye noomatshini kunye nendlela yokuzisebenzisa kwakhona- Ikkaro
yokuqalisa >> Ukurisayikilisha i-elektroniki kunye noomatshini kweembiza
Ukurisayikilisha i-elektroniki kunye noomatshini kweembiza
Siqala isiqendwana esitsha se- kwakhona kuzo zonke izixhobo ezibonakalayo ezingenamsebenzi esinazo emakhayeni ethu kwaye siza kuzilahla, okanye izixhobo esizinikwa ngabahlobo okanye usapho.
Ndithetha ukuba i-floppy drive, iithoyi zosana okanye ezaseTshayina. Ii-Dryers, ii-thermos, iithelevishini, ii-routers, ii-mobiles kunye nee-smartphones, njl njl. Asilazi inani lenkunkuma esiyivelisayo, yayo yonke into esiyilahlayo ...
Sifuna ukuphendula umbuzo oqhelekileyo.
Ndingenza ntoni nge ...?
Yintoni endinokuyisebenzisa ...?
Siza kuzama ukungazihlanganisi, sifumane izinto ezahlukeneyo kwaye sibone ukuba yeyiphi na esinokuyisebenzisa okanye siyisebenzise kwakhona kwaye siyenzela ntoni.
Siza kuzama ukwenza izahlulo ngokuyinxenye ngoomatshini nangekhompyuter.
Siyavuya ukufumana uncedo okanye ingcebiso.
Eli lelinye lawona macandelo endiwathandayo, ndichithe ubomi bam ndithatha izinto ndizizama ukunika okwesibini, okwesithathu kunye nokusetyenziswa okuninzi. Ndiyakholelwa ngokwenene ukuba ayifuneki ukulungiswa kuphela kodwa ukuphinda usebenzise kwakhona kwaye uphinde usebenzise kwakhona. Into ekufuneka siyazi kwaye ekufuneka ibethelelwe kubantu abancinci esikolweni, kusapho, besebancinci kakhulu. Umhlaba ongcono.
Ndigcine ixesha elide iimonitha ezimbini zekhompyuter zeSamtron ezingalunganga, ekubeni ndingazi ukuba mingaphi iminyaka eyadlulayo. Ingcamango yokuqala yayikukuzama ukulungisa enye ngamalungu yenye. Kodwa kule mihla akusenangqondo ukuba ne-monitor yolu hlobo, ngoko ke ndiza kubaqhawula kwaye ndigcine iindawo ezinomdla.
Into yokuqala yivule nje, kwaye ngaphambi kokuba uchukumise nantoni na, kukuba khupha i-flyback ukuze ingasiniki naluphi na ukukhutshwa kweshumi lamawaka e-volts. Umsebenzi uyafana nalowo siwenzayo ukukhupha i-condenser ye-microwave. Siyijikeleza ngokufutshane.
Phinda usebenzise iibhetri ezisetyenzisiweyo kwiipaneli zelanga
Abaphandi abavela mit ndicwangcise indlela yokwenza phinda usebenzise iibhetri zemoto ezisetyenzisiweyo kwaye uzisebenzise ukwenza iiphaneli zelanga.
Kude kube ngoku, iipesenti ezingama-90 zeebhetri zemoto ekhokelwa e-United States ziphinda zisetyenziswe ukwenza iibhetri ezininzi, kodwa kuyakufika ixesha apho obu buchwephesha buya kutshintshwa zezinye iintlobo zeebhetri kwaye ukuba akusenakwenzeka / kunomdla wokuphinda kusetyenziswe kubo, banokuba yinto enzulu Ingxaki yokusingqongileyo.
Ke iMIT ifumene isisombululo esihle kakhulu. Ngenkqubo elula evumela ukuba ziphinde zisetyenziswe ukuze zijike kwiipaneli zelanga. Kwaye into elungileyo kukuba la macwecwe xa eqhekeka inokuphinda isetyenziselwe ukubuyela kwiibhodi ezintsha.
Kwakhona, izibonelelo azipheleli apha. le nkqubo ayingcolisi kangako kunaleyo isetyenziswayo ngoku ukukhipha ilothe. Ke yonke into ibonakala ifezekile. Nkqu ukusebenza kwala macwecwe matsha ajikeleze i-19% phantse ngokufanayo ubuninzi obuphunyezwe ngezinye iitekhnoloji. Ngoku eyona nto ilahlekileyo yinkampani ezinikele kwintengiso kuyo.
Ukusasaza idynamo yebhayisekile
Ndifumene i Idynamo endala ayisebenzi loo nto. A dinamo Yiyo Umbane wombane ukuguqula amandla oomatshini abe ngumbane wombane ngokuthe ngqo.
Phinda usebenzise iikomityi zeyogathi zeglasi
Ukuba ungomnye wabo batya iyogathi kwisitya seglasi, ngokuqinisekileyo uzigcinile iiglasi zokwenza into engagungqiyo kwaye ekugqibeleni ziphelela egumbini okanye kubi kakhulu, kudoti.
Ungayisebenzisa njani kwakhona kwaye uphinde uphinde usebenzise ijeli yesilika
El Ijeli yesilica Isetyenziswa njengearhente yokomisa ukulawula ukufuma kwendawo ebiyelweyo. I-porosity yayo ephezulu iyenza ibe sisisixhobo esihle sokufuma. Njengoko uza kubona nangona kukho intetho Ijeli yesilica, ayisiyiyo ijeli, kodwa iqinile.
Ezi ngxowa zifunyanwa xa uthenga izihlangu, iimpahla kunye nezinye izinto ezininzi. Kwaye amaxesha amaninzi asazi ukuba masenze ntoni ngabo kwaye baphelela kudoti.
I-silica gel iqulethe i-cobalt chloride, ethi, xa isabela ngomswakama, ijike iblue ibe pink. Uthuli oluveliswe xa uphatha le mveliso lunokubangela i-silicosis, ke musa ukuyityumza okanye into enjalo.
Phinda usebenzise iStrofoam okanye iStrofoam
El i-polystyrene ekhutshiwe (XPS)Kuthengiswa phantsi kwegama lika IstryrofoamIqukethe i-95% ye-polystyrene kunye ne-5% yegesi evalelwe kwinkqubo ye-extrusion.
Ukwenziwa kweekhemikhali polystyrene ekhutshiwe iyafana naleyo ye- polystyrene eyandisiweyo. Kodwa inkqubo yokubumba I-Styrofoam, Inika ukumelana okukhulu kwe-thermal kwaye iyenze ibengcono ukunyamezela amanzi.
Ukuba awuyazi into eyi-polystyrene, yi-cork, mhlophe kubo bonke ubomi, kunye isitampu, yeyona ufumanisa ukuba ngamanye amaxesha iqina ngakumbi. Ngugwebu esilubonayo abalusebenzisayo xa kufikelelwa kwizakhiwo
Sebenzisa kwakhona amanzi oomatshini bokuhlamba
UManuel osuka http://comiendo.wordpress.com/category/eco-chismes/ usithumele eli nqaku ukuba siphinde sisebenzise amanzi kumatshini wokuhlamba.
Kuba sisebenzise i ecoball ukuhlamba, sicinga njalo uwasebenzisa njani kwakhona amanzi kumatshini wokuhlamba ukunkcenkceshela igadi Ukuthatha ithuba lokuba iphuma ngaphandle kweekhemikhali. Kuba umatshini wokuhlamba usegaraji, bekukho indawo yovavanyo kunye nokufaka inkqubo ethembekileyo nezimeleyo. Konke okufuneka ukwenze ukuguqula isitshixo ngokuxhomekeke ekubeni usebenzisa isepha okanye hayi kwindawo yokuhlamba. Kulungile iya kuyilo, kakuhle kumsele. Ebusika siza kuba nawo la manzi kodwa ehlotyeni yonke into eveliswayo ayinakwanela.
Yakha i-chess ngeziqwenga ezirisayikilishwe
Ngaba uyayithanda i- chess? Ngale modeli unokuphefumlelwa yenza eyakho ichess ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe,
I-Chess eneeboliti kunye namandongomane
ngakumbi amandongomane, imithombo, iwasha kunye nezikrufu.
Kule meko, iziqwenga ze chess zenziwe kunye iinxalenye zemoto.